Realme 5 iyo 5 Pro: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilowga | Androidsis
Realme 5 iyo Realme 5 Pro: Nooca cusub ee bartamaha
Toddobaadyadan la soo dhaafay ayaa noo imanayay Daadad kala duwan oo ku saabsan Realme 5 iyo 5 Pro. Kaamirooyinka ay isticmaali lahaayeen ilaa awoodda batterigaaga, Waxaan awoodnay inaan ogaano faahfaahinta qaar ka mid ah noocyadan cusub ee noocyada dhexdhexaadka ah. Ugu dambeyntiina, labadan moodel ayaa durba si rasmi ah loogu soo bandhigay munaasabad.
Sumadda-hoosaadyada OPPO waxay cusbooneysiineysaa heerkeeda dhexe sidan oo leh laba nooc oo cusub. Realme 5 iyo 5 Pro waxay u hoggaansamaan dhinacyo badan oo aan hadda ku jirno qaybtan dhexe ee Android. Laga soo bilaabo naqshadeynta xulashada kamaradaha labadaba.
Ilaa inta naqshadeynta laga hadlayo, astaanta ayaa nooga tagaysa waxyaabo yar oo lama filaan ah. Qeyb ka mid ah qaabka dhibic biyo ah ayaa lagu xushay shaashadeeda, wax ka sii badan oval kiiskan, laakiin aan xukumin shaashadda. Dhinacyada dhinaca waa khafiif yihiin, sidaas darteed shaashadda si fiican ayaa loo isticmaalaa. Afarta kamaradood ee gadaal kiis kasta, inkasta oo nooc kasta uu leeyahay qeexitaano kala duwan.
Realme 3i: Taleefanka cusub ee shirkaddu waa rasmi
1 Tilmaamaha Realme 5 iyo Realme 5 Pro
Tilmaamaha Realme 5 iyo Realme 5 Pro
Xaqiiqdu waxay tahay in labada moodel ay nooga tegayaan qaab isku mid ah, oo isku cabir ah, laakiin qeexitaano kala duwan. Isku-darka RAM iyo kaydinta ama kamaradaha ayaa ku kala duwan Realme 5 iyo Realme 5 Pro. Waxaan arki karnaa kala duwanaansho cad oo arrintan la xiriira. Marka waa muhiim in la ogaado qeexitaannada dhameystiran ee labadan nooc ee astaanta. Waxaad ka arki kartaa hoosta:
6,3-inch IPS LCD leh HD + xallinta 1.600 x 720 pixels 6,3-inch IPS LCD leh FullHD + Xallinta 2.340 x 1080 pixels
Snapdragon 665 oo leh Adreno 610 GPU Snapdragon 712 oo leh Adreno 616 GPU
RAM IYO Kaydinta
Kordhinta MicroSD ilaa 256GB 4GB / 64GB
Kordhinta MicroSD ilaa 256GB
12 MP + 8 MP xagal ballaadhan oo ballaadhan oo leh fur f / 2.25 + 2 MP makro oo leh f / 2.4 + 2 MP sawir f / 2.4 48 MP leh aperture f / 1.79 + 8 MP xagal aad u ballaadhan oo leh f / 2.25 + 2 MP macro leh aperture f / 2.4 + 2 MP sawir leh aperture f / 2.4
13 MP 16 Mp oo leh fur f / 2.0
Android 9 Pie oo leh ColorOS 6.0 Android 9 Pie oo leh ColorOS 6.0 iyo Hyperboost 2.0
Qiyaasaha iyo Miisaanka
164,4 x 75,6 x 9,3 mm iyo 198 garaam 157 x 74,2 x 8,9 milimitir iyo 184 garaam
5.000 Mah oo leh Kharashka degdegga ah ee VOOC 3.0 4.035 Mah oo leh Kharashka degdegga ah ee VOOC 3.0
XIDHIIDHKA IYO CODKA
Dual 4G / Dual Standby, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, Nooca USB C, 3,5mm Jack, FM Radio Dual 4G / Dual Standby, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, Nooca USB C, 3,5mm Jack, FM Radio
Akhristaha sawirka faraha gadaal, codka Dirac HD Akhristaha sawirka faraha gadaal, codka Dirac HD
Astaantu waxay nooga tagaysaa laba nooc oo aad u dhameystiran bartamaha. Naqshadayntu waa isku mid, inkasta oo aan arki karno kala duwanaansho cad oo qeexan. Realme 5 waa qaab xoogaa fudud, oo leh Snapdragon 655 oo ah processor. Waxay leedahay afar kamaradood oo gadaal ah, oo leh 13 MP shidma weyn, oo ay ku shaqeyneyso sirdoon farsamo. Batariga taleefanka ayaa leh awood dhan 5.000 mAh, taas oo shaki la’aan ina siin doonta ismaamul wanaagsan marka aan u adeegsanno, sidoo kale waxay si deg deg ah u soo dallacaysaa. Dareemida faraha ayaa ku jirta kiiskan dhabarka taleefanka.
Dhinaca kale waxaan helnaa Realme 5 Pro, oo ah nooc ka sii dhammaystiran. Telefoonku wuxuu leeyahay processor Snapdragon 712, sidaas darteed waxay ku jirtaa heerkeedu sareeyo bartamihiisa. Waxay sidoo kale la socotaa afar kaamiro, kaliya kiiskan dareenka ugu weyn waa 48 MP mid, oo ka duwan qaabka caadiga ah, seddexda kale wali isma bedelin. Sidoo kale kamaradda hore way ka duwan tahay kiiskan. Batariga xoogaa wuu ka yaryahay, awoodna u leh 4.035 Mah oo kiiskan ah. Haddii kale waxay ku sii jiraan iyaga oo aan khilaaf ku jirin.
Sida caadiga ah telefoonada astaanta, bilaabay Hindiya markii ugu horeysay la xaqiijiyay. In kasta oo ay yeelan doonaan taariikho sii deyn oo kala duwan kiiskan. The Realme 5 wuxuu imaan lahaa Hindiya Ogosto 27, halka kuwa daneynaya qaabka Pro ay tahay inay inyar sugaan. Kiiskiisa, waxaa laga bilaabi doonaa Sebtember 4 waddanka.
Telefoon kasta wuxuu ku yimaadaa saddex nooc xagga RAM iyo kaydinta. Ilaa iyo inta laga hadlayo midabada, sidaan soo aragnay, shirkaddu waxay u heellan tahay midabyo buluug iyo buluug ah, qaar iyaga ka mid ah oo leh saameyn cufan, oo weli ku jira moodada maanta. Realme 5 wuxuu yeelan doonaa saddex nooc, oo qiimahoodu kala yihiin:
Qaabka leh 3/32 GB wuxuu ku kici doonaa 9.999 rupees (126 euro in la beddelo)
Qaabka leh 4/64 GB wuxuu ku kici doonaa 10.999 rupees (138 euro in la beddelo)
Nooca leh 4/128 GB waxaa lagu qiimeyn doonaa 11.999 rupees (151 euro isbeddelka)
Realme 3 Pro: qiimaha iyo helitaanka Spain
Dhinaca kale, Waxaan sidoo kale sugeynaa seddex nooc oo ah Realme 5 Pro, oo leh saddex isku-darka RAM iyo kaydinta. Xaaladdaada, qiimayaashu waa:
Nooca leh 4/64 GB waxaa lagu qiimeeyaa 13.999 rupees (176 euro isbeddelka)
Nooca leh 6/64 GB wuxuu ku kici doonaa 14.999 rupees (188 euro in la beddelo)
Qaabka leh 8/128 GB waxaa lagu qiimeeyaa Rs 16.999 (214 yuuro oo la beddelo)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Realme 5 iyo Realme 5 Pro: Nooca cusub ee bartamaha
Spotify waxay horeyba uga shaqeyneysaa "Sheekooyin" u gaar ah adeegyadeeda baahinta muusikada
Xiaomi Mi 9T Pro ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay